Raga SOMALIYEED oo lasheegay in Kuwaalanyihin Dumarka Dabada weyn+DAAWO+MUQAALKA | shumis.net
Home » galmada » Raga SOMALIYEED oo lasheegay in Kuwaalanyihin Dumarka Dabada weyn+DAAWO+MUQAALKA
Raga SOMALIYEED oo lasheegay in Kuwaalanyihin Dumarka Dabada weyn+DAAWO+MUQAALKA
Baaris lagu sameeye raga Madow ee kunool caalamka gaar ahaan Dunida sadaxaad aya alasheegay in yihin raga ugu jecel dumarka dabada weyn ame Dumarka sinaha weyn.
Warbixintaan ayaa lagu daabacay wargeys kasoo baxa wadanka mareekanka waxaana page kiisa kowaad lagu sheegay in raga midabka madow leh ee blse kasoo jeedo wadamada africa in yihin raga ugu jecel dumarka dabada weyn waxaan lasheegay in qaarkood xaasaskooda ku amraan in ay beertaan Dabada weyn si oga helaan raaxo waali ah xiliyada ay socoto Galmada.
Warbixintaan ayaa lagu tilmaamay in raga qaarkood haweeynka kusoo xushaan dabada weyn xiliyada ay lahasaawayaan isla markaan ka cararaan dumarka aan laheyn dabada waxaana taasi lasheegay baaris oo sameeye wariye katirsan wargeyskaas oo booqasho kutagay wadamada Kenya S/africa Ugandha Itoobiya Masar Brundi Ghana Soomaaliya iyo wadamo kale.
Waxa oo sheegay in oo soo arkay dumar xiliyada ay marayaan wadooyinka gashtaan caagag si usoo bidhaamiyo muqaal mujinaayho in haweneyda ay tahe mid
dabo weyn isla markaan ay jecelyihin raga.
Wariyaha ayaa sheegay in su aalo oo weydiye rag farabadan oo african sababta ay kujeclaadeyn dumarka dabada weyn aya sheegay in dhamaatooda isku raaceyn in ay ku kacsadaan naagaasi haba ugu sii darnaato xiliyada ay socoto ciyaarta kulul ee sariirta.
kuwa qaarkood aya ishegeyn ayuu yiri wariyahain xiliga ay socoto ciyaarta sariirta in dumarka umsarsiyaan saliid ame ame kareem si gacanta ugu xan xanteyaan ayagoo dumarka kasara maraayo.
Ugu danbeyntii waxa si aad u daneenin raga Cadaanka ah dumarka dabada weyn wallow siweynn ugu waalanyihin Raga african waxaana taasi lasheegay in ay tahe dooqooda madaama hore loogu yaqaanay Naasaha waa weyn
Title: Raga SOMALIYEED oo lasheegay in Kuwaalanyihin Dumarka Dabada weyn+DAAWO+MUQAALKA
Posted by galmada Net, Published at November 28, 2015 and have 0 comments